एनआरएन नेतृत्वमा आकर्षण | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपाल र हङकङको खेल स्थगित
एनआरएन महाधिवेशनः दक्षिणपूर्वका २ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता, साझा सचिव बनाउन अपिल →
एनआरएन नेतृत्वमा आकर्षण
Posted on 15/10/2017 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
काठमाडौं : चुनाव जित्न खर्च, चुनाव जितेपछि संस्थाको कार्यक्रममा हिँडे पनि खर्चैखर्च‍-तैपनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पदाधिकारीमा जबर्जस्त आकर्षण देखिएको छ। अध्यक्ष पदमा त यसपालि उम्मेदवारद्वय जमुना गुरुङ र भवन भट्टले जनही १५/२० करोड रुपैयाँभन्दा कम खर्च नहुने अनुमान सहभागीले गरेका छन्।
दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाइने विधानको प्रावधानको कारण एनआरएनएका अध्यक्ष शेष घले यसपालि चुनाव लड्न नपाउने भए तर उनकै श्रीमती जमुना गुरुङ अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकी छन्। संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो लगातार तीन पटक अध्यक्ष भएपछि विधान संशोधन गरी दुई पटकभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो। एनआरएनएको अध्यक्ष पछिल्लो समय निकै खर्चिलो पद बन्दै गएको छ।
यसका लागि तयारी पनि लामै गर्नुपर्छ। दुई वर्षअघि दोस्रो पटक उपाध्यक्ष भएदेखिनै भट्ट अध्यक्षको तयारीमा जुटिसकेका थिए। उम्मेदवार हुने हल्ला नगरे पनि जमुनाले पनि तयारी गरिरहेकी थिइन्। एनआरएन पदाधिकारीमा के आकर्षण छ र यत्रो समय÷पैसा खर्च गरी चुनाव जित्न खोजिदै छ ? ‘पैसा कमाएपछि पहिचान खोज्नु मानवीय स्वभावै हो’, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने भन्छन्, ‘आफूलाई चिनाउन एनआरएनको अध्यक्ष बन्न खोज्ने हो।’ एनआरएनको नेतृत्वमा पुग्न र पुगेपछि पनि धेरै खर्च भए पनि त्यसलाई व्यापारमार्फत असुल गर्न नसकिने अनुभव उनी सुनाउँछन्। ‘अरु व्यापारी सरहनै झण्झट बेहोर्नुपर्छ’, उनी थप्छन्, ‘नेता चिने पनि फटाफट काम हुने हैन।’
चुनावभन्दा ६ महिनाअघिदेखि चुनावी दौडाहाका क्रममा खर्च गर्नुपर्ने उम्मेदवारले चुनाव ताका पैसा बगाउनु पर्छ। चुनाव जितेपछि पनि दुई वर्षे कार्यकालका क्रममा खर्च भइरहन्छ। पूर्वअध्यक्ष लामिछानेका अनुसार स्वयमसेवी पद भएकाले अध्यक्षले संस्थाकै काममा हिँड्दा पनि व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्छ। अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा एनआरएनएको इकाइ (राष्ट्रिय समन्वय समिति) भएका देशमा भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिको महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनपर्ने हुन्छ। बर्सेनि महादेशस्तरका सम्मेलन हुन्छन्। ‘दुई वर्षमा केही नभए पनि पाँच करोड रुपैयाँ त खर्च हुन्छ’, लामिछाने भन्छन्। उपेन्द्र महतोले सामाजिक काममा उदारतापूर्वक सहयोग गरेकाले अरु पदाधिकारीबाट समाजले त्यस्तै आश गर्छ। ठाउँठाउँमा लाख÷करोड सहयोग गरिदिनुपर्ने हुन्छ।
एनआरएनमा राजनीतिक दल घुसिसकेका छन्। दलका शीर्ष नेताले पनि उम्मेदवारबाट पैसा लिएरै समर्थन दिने गरेको अगुवा बताउँछन्। सन २०११ मा दोस्रोपटक अध्यक्ष बन्न खोजेका देवमान हिराचन एमालेले समर्थन नगर्ने भएपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। उनले एमाले÷माओवादीको समर्थन पाउने आशमा उम्मेदवारी दिएका थिए। २०१३ मा कांग्रेसको तर्फबाट डा. प्रकाशशरण महत र एमालेका भीम रावलले सम्मेलनस्थलमै पुगेर शेष घलेलाई समर्थन जनाएका थिए। एनआरएनमा कांग्रेस सबैभन्दा बढी भोट प्रभावित पार्ने शक्ति मानिन्छ। यसपालि पनि गुरुङ र भट्ट कांग्रेस समर्थनका लागि लविङ गरिरहेका छन्।
कार्यकालमा अध्यक्षमात्र हैन, अरु महत्वपूर्ण पदाधिकारीले पनि आफ्नो व्यापार आदिमा उति समय दिन पाउँदैनन्। लामिछानेले अध्यक्ष हुँदा मस्कोको व्यापार भाइभतिजाले सम्हालेका थिए, जर्मनीमा होटल साझेदार कुमार पन्तको जिम्मा थियो। कुमार पन्त उपाध्यक्ष भएपछि होटल सम्हाल्ने पालो लामिछानेको भएको छ। अस्ट्रेलियाको धनाढ्य सूचीमा १०२ औं नम्बरमा रहेकी गुरुङ एनआरएनएको अध्यक्षमा उठ्ने सोच बनाएपछि गोरखाको लाप्राकमा एनआरएनएले बनाइरहेको वस्ती निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न छन्। उनले लाप्राकको वस्तीलगायत अधूरा काम पूरा गर्न आफूलाई मतदान गर्न भनिरहेकी छन्।
स्थापनाकालदेखि सक्रिय पूर्वउपाध्यक्ष राम थापाका अनुसार सुरुसुरुमा एनआरएनप्रति देशभित्र निकै आकर्षण÷सम्मान थियो। प्रेसले एकदमै महत्व दिएको थियो। राजनीतिक दलको उस्तै सम्मान थियो। विश्व सम्मेलनका क्रममा काठमाडौंमा भेला हुने एनआरएन अगुवालाई प्रधानमन्त्रीका साथै प्रमुख दलका शीर्ष नेताले ब्रेकफास्ट वा लन्च÷डिनरको निम्ता गर्थे। पहिलो विश्व सम्मेलन हुँदा राजा ज्ञानेन्द्र उपस्थित भएका थिए। राजाको सक्रिय शासन खतम भएपछि पनि उचाइमा पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि महत्व दिए।
एकचोटि सम्मेलनमा सहभागी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अध्यक्ष उपेन्द्र महतोलाई अँगालो हालेका थिए। ‘नेपालका एक से एक ठूलाबडाकहाँ एक्सेस हुने रहेछ भन्ने भएपछि पदको हानथाप सुरु भइहाल्यो’, उनी थप्छन्। यस्तै आकर्षणको कारण चुनाव खर्चिलो हुँदै गएकाले एनआरएनएको नेतृत्वमा जागिर खाने वा सानोतिनो व्यवसाय गरिरहेको गैरआवासीयले पुग्ने सपना पनि देख्न नसकिने अवस्था बनेको उनी बताउँछन्। इन्फोएनआरएनमा राजनीतिक दल घुसिसकेका छन्। दलका शीर्ष नेताले पनि उम्मेदवारबाट पैसा लिएरै समर्थन दिने गरेको अगुवा बताउँछन्।(अन्नपूर्ण )